Maamulka Gobolka Banaadir oo tababbar u furay dhallinyaro ka kala timid 17-ka Degmo ”SAWIRO” – Radio Muqdisho
Maamulka Gobolka Banaadir oo tababbar u furay dhallinyaro ka kala timid 17-ka Degmo ”SAWIRO”
Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasada ee Maamulka gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Diiriye ayaa maanta tababbar u furay fududeeyayaasha Mashruuca waxbarashada madaniga ah oo ay wadaan Ururuka Kaah oo samafalka ka shaqeeya.
Tababarka ayaa loo furay dhallinyaro ka kala socotay 17 degmo ee Gobolka Banaadir, waxaana la doonayo inay ka qeyb qaataan horumarinta waxbarashada madaniga ah.
Tababarka oo ay bixinayeen khabiiro Soomaaliyeed ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas’uuliyiin ka socotay Wasaaradda arrimaha gudaha, waxaana uu tababbarka la soo gabo gabeyn doonaa 4-ta bishan Janaayo.
Mashruucaan waxbarashada madaniga ah waxaa horay xariga uga jaray duqa Magaalada Mqdisho, waxaana maanta guddoomiye ku-xigeenka uu furay tababbarka la siinayo dhallinyarada arrintaasi ka qeyb qaadan lahayd, isagoo kula dar daarmay in waxyaabaha ay bartaan bulshadooda ugu adeegaan.
Askari: “Waa halyeeyga sanadka”
Wasaaradda haweenka oo qabatay kulan looga tashanayay siyaasadda Qaran ee jinsiga “SAWIRRO”